Ahoana ny fomba hisafidianana ny lasantsy masinina CNC Router?
1. Masinina fanaovana sokitra dokambarotra: ny zavatra sokitra dia fitaovana malefaka ihany, noho izany ny herin'ny tsiranoka amin'ny milina fanoratana doka dia mety ao anatin'ny 1.5kw-3.0kw. Raha misafidy toy izao ianao dia afaka hahatratra ny tanjon'ny sokitra sy ny fitsitsiana vola. 2. Masinina fanaovana sokitra hazo: Ny fihodinan ...Lire la suite »
Ampiasao amin'ny fomba milina fanaovana sokitra vato
(1) tontolon'ny asa Ny milina fanaovana sokitra vato dia fitaovana mechatronics teknolojia avo lenta, izay misy fepetra takiana amin'ny tontolon'ny asa. (Whatsapp: 008615966055683) 1. Sorohy ireo fitaovana izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fampitana famantarana ny milina fanoratana, toy ny herinaratra mahery ...Lire la suite »
Ahoana ny fomba fisafidianana ireo vato Blades Machine CNC Router? Torolàlana ho an'ireo mpampiasa fitaovana amin'ny milina fanoratana vato
Stone CNC Router Machine blades ho an'ny mpampiasa: 1. Ho an'ny fanapahana akrilika ny milina sokitra vato, dia soloina ny fanapahana milina fitotoam-bolo tokana. Izy io dia miavaka amin'ny fanodinana tsy misy setroka sy tsy misy fofona, hafainganam-pandeha, avo lenta, tsy miraikitra, sariaka tokoa amin'ny tontolo iainana, ...Lire la suite »
Hiady, handresy isika!
Nanomboka tamin'ny Janoary 2020, dia nisy aretina voan'ny areti-mifindra antsoina hoe "Novel Coronavirus Infection outbreak Pneumonia" tao Wuhan, China. Nanohina ny fon'ny olona erak'izao tontolo izao ny areti-mifindra, manoloana ny valanaretina, mazoto mihetsika ny vahoaka sinoa miakatra ...Lire la suite »
27, Jolay, 2019, tonga any amin'ny orinasa kami ny mpanjifa indianina
27, Jolay, 2019, andro mafana eto eto Jinan China, tonga ny mpitsidika Indiana hitsidika ny orinasa kami, tongasoa anay ry namana rehetra. Nitsidika ny departemanta famokarana milina CNC izahay namana nandritra ny 3 ora teo, avy eo dia nitsidika ny departemanta famokarana milina mpanaingo laser CO2 izy ireo taorian'ny fitsidihana ...Lire la suite »
Inona ny milina CNC router?
CNC ROUTER Mpikambana mifehy ny kaonty nomerika (CNC) dia fika milina sy fanendahana mifehy an-tserasera izay mifandraika amin'ilay mpampitondrazahana ny tanana ampiasaina amin'ny fanapahana ireo fitaovana sarotra samihafa, toy ny hazo, composite, aluminium, vy, plastika, fitaratra ary foibe.  CNC routers dia afaka manatanteraka ny asan'ny maro c ...Lire la suite »
Ankafizo ny fiasa
Shandong DADI CNC Equipment Co, Ltd dia naorina tamin'ny taona 2014. Izy dia mpanamboatra matihanina amin'ny CNC ROUTER sy CNC LASER machine.Products dia ampiasaina betsaka amin'ny: indostrian'ny dokambarotra, indostrian'ny fananganana hazo, indostrian'ny vato, fanaka indostrialy, trano fandraisam-bolan'ny aluminiana fandraisan'ny rindrina. ary ind hafa ...Lire la suite »
Tandremo tsara ny hividianana milina fanapahana tamin'ny laser
Post fotoana: Aug-03-2018
Ny rehetra izao fanapahana tamin'ny laser fampiasana milina no nitondra vy tsy hanahirana ny orinasa fanodinana. Raha mbola jambena ny be dia be ny fanapahana tamin'ny laser milina, dia afaka mihaino ireo hevitra ireo. 1. fanapahana kalitaon'ny tamin'ny laser fanapahana; tahaka ny sasany kitchenware, fiara, milina, fitaovana sy ny hafa ...Lire la suite »
Inona no fandravahana an-trano dia afaka tamin'ny laser hamorona milina fanapahana?
Ny sary sokitra tamin'ny laser dingana dia tsy maranitra "antsy" ao amin'ny orinasa mpamokatra entana orinasa, fa na dia ny firavaka sy ny asa-tanana izay hitantsika na aiza na aiza eo amin 'ny fiainana andavanandro dia tsy azo hisaraka amin'ny tamin'ny laser sokitra. Andeha hijery inona no karazana akanjo fianakaviana isika dia afaka manorina. Ny fampiasana ny tamin'ny laser ...Lire la suite »
Vahaolana ny tamin'ny laser condensation amin'ny fahavaratra
Amin'izao fotoana izao, dia tamin'ny fotoana Meng Xia ny vanim-potoana, rehefa mampitombo ny thunderstorm, ny orana sy mando matetika dia afaka mora foana ny tontolo iainana mitondra ho amin'ny condensation ao amin'ny tamin'ny laser, dia toy izany no hampihena ny fanatontosana ny tamin'ny laser ary mety ho simba. Ahoana no hamahana ny toe-javatra ny tamin'ny laser condensation? Inona no S ...Lire la suite »
Adiresy: Efitra 1102, North Rongsheng Times International Building 6, Quanfu Overpass, Distrheng Licheng, tanàna Jinan, faritany ShanDong, Sina
DADI CNC: Salama, tongasoa eto hitsidika ny tranokalanay.
DADI CNC: Azoko atao ve ny manampy anao?